अलैंचीको रेशालाई व्यवसायमा बदल्ने माया | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी अलैंचीको रेशालाई व्यवसायमा बदल्ने माया
on: June 10, 2019 रोजगारी
काठमाडौं ।मुलुकका ५५ जिल्लाका करीब १० लाख कृषक अलैंची खेतीमा संलग्न छन् । तीमध्ये अधिकांशको बुझाइ अलैंचीको दाना मात्र आम्दानीको स्रोत हो भन्ने छ । ताप्लेजुङकी माया गुरुङ भने अरूभन्दा फरक छिन् । उनले अलैंचीको डाँठको रेशालाई आम्दानीको स्रोत बनाएकी छन् ।
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा उनले खोलेको ‘चन्दन फाइबर उद्योग’माअलैंचीको रेशाबाट पिरा, रुम म्याट, डोर म्याट, ढाकी, हट म्याट, राउन्ड म्याट, रनर म्याट, टी म्याट, ब्याग र पर्स लगायत वस्तु उत्पादन हुन्छन् । उनको उद्योगमा १० महिलाले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरू फुर्सदमा उद्योगमा जान्छन् र विभिन्न वस्तु बुनेर आम्दानी गर्छन् ।
‘उहाँहरू घरको सबै काम सकेर आफूले चाहेको समयमा काम गर्न आउनुहुन्छ,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘यस्तो कामबाट महीनामासात हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नुहुन्छ ।’ वस्तु तयार पारेको संख्याअनुसार उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन् । उद्योग, व्यापारका प्रदर्शनीहरू आयोजना हुने सिजनमा ती महिलाले जनही मासिक रू. २५ हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । उद्योगबाट मासिक १ लाखभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ ।मासिक रू. ५० हजारसम्म नाफा हुने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
गुरुङका बाआमाले अलैंचीको रेशाबाट गुन्द्री र दाम्लो बाट्ने गरेका थिए । यही बुनाइ व्यावसायिक बन्ला भनेर मायाले पनि सोचेकी थिइनन् । २०६७ सालमा काठमाडौं आउँदा उनले ललितपुरको कुपण्डोलमा घाँसले बुनेर बनाएका विभिन्न कलात्मक वस्तु देखिन् । घाँससमेत बिकेको देखेर उनलाई अलैंचीको रेशाको प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्न मन लाग्यो ।
केही वस्तुको उत्पादन गरी प्रदर्शनी र विक्री गरेपछि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइन् र २०६८ सालमै उद्योग दर्ता गराइन् । तर, अलैंचीको रेशाको प्रयोजनबारे ज्ञान नहुँदा उनले शुरूमा घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । ‘शुरूमा कस्तो अलैंची काम लाग्छ भन्ने थाहा नपाउँदा ट्रकका ट्रक अलैंची खेर गयो,’ उनी भन्छिन् । धेरैपछि मात्र गाँठा भएको अलैंची काम नलाग्ने रहेछ भनेर उनले बुझिन् ।
अलैंचीको रेशाबाट बनेका वस्तु जति पुरानो हुँदै गए, त्यति नै गाढा रंग आएर नयाँ र आकर्षक देखिन्छन् । त्यस्तै पुराना वस्तु नै बढी लोकप्रिय भएको उनी बताउँछिन् । २०६८ सालमा बुनेको ब्याग देखाउँदै उनले भनिन्, ‘यसको रेशा कुहिन्न, केही दाग लागिहालेछ भने पनि धोएर हटाउन सकिन्छ ।’
उनलाई अलैंचीको रेशाबाट बन्ने सामानको ब्रान्डिङ गर्न झण्डै ७ वर्ष लाग्यो । २०७४ सालपछि भने उनलाई भ्याइनभ्याइ छ । देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका अर्डरअनुसार सामान बनाउन उनलाई फुर्सद छैन । हाल काठमाडौंका विभिन्न पसलमा उनको उद्योगबाट उत्पादित अलंैचीका रेशाबाट बनेका वस्तु पाइन्छन् । काठमाडौंका व्यवसायीको सम्पर्कमा उनले ताप्लेजुङमा उत्पादित सामान बजारमा पुर्‍याइरहेकी छन् ।
व्यवसाय विस्तारका क्रममा उनी भारतको देहरादुनसम्म पुगेकी छन् । तर, उनले बनाएका सामान व्यवसायीले भारत, पाकिस्तान र कतार लगायत देशमा पनि निर्यात गर्दै आएका छन् । उनी हरेक दिनजसो के नयाँ उत्पादन गर्नेबारे पनि सोच्छिन् । कहिले बजारमा देखिने वस्तु हेरेर उनी त्यसअनुसारको डिजाइन बनाउँछिन् भने कहिले अर्डर गरेको डिजाइनअनुसार पनि नयाँ सामान बुन्ने गर्छिन् ।
युवावर्गलाई आफ्नो संस्कृति झल्किनेगरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमार्पmत उद्यम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । उनी आफ्ना सामानहरूमा पनि संस्कृति झल्किने गरी डिजाइन गर्न रुचाउँछिन् । उनकाअनुसार नेपालजस्तो देशमा संस्कृति प्रस्तुत हुनेगरी वस्तु उत्पादन गरिने उद्योगको सम्भावना अत्यधिक छ ।
Jeeban kumar ale
It’s great job all the youth who are jobless should be forward for this kind of creative things